Azịza ngwa ngwa: Mmiri distilled dị mma maka azụ Betta - BikeHike
Mbido » iche » Azịza ngwa ngwa: Mmiri distilled dị mma maka azụ Betta
Kedu mmiri ị na-eji maka azụ beta?
Ọ dị mma iji mmiri a na-ekpo ọkụ n'ime tank azụ?
Kedu ka esi eme mmiri azụ beta?
Enwere m ike iji mmiri karama maka betta m?
7.6 pH ọ dị mma maka Bettas?
Kedu ụdị mmiri ị ga-eji na tank azụ?
Mmiri a sachara ọcha ma ọ bụ ekpochapụrụ agbachapụ ọ ka mma?
Mmiri a na-ekpo ọkụ nwere chlorine?
Mmiri siri ike ọ na-amasị Bettas?
Ugboro ole ka ị ga-agbanwe mmiri Betta?
Betta ọ na-amasị Blackwater?
Kedu otu esi eme ka mmiri pọmpụ dị mma maka azụ?
Ị nwere ike itinye azụ beta n'ime mmiri mgbata na-enweghị ntụ oyi?
Bettas chọrọ nnu na mmiri ha?
Nwere ike ị drinkụ mmiri ọ distụ distụ?
Bettas ọ chọrọ nzacha?
Kedu otu m ga-esi wedata pH na azụ beta m?
Kedu pH ka bettas masịrị?
Mmiri kacha mma ịgbakwunye na tank gị bụ mmiri mgbata, ọ bụrụhaala na ọ na-ebute ụzọ. Ọ bụrụ na emeghị nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịgbalị iji mmiri iyi. Ị kwesịrị ị na-ezere mmiri dị ọcha ma ọ bụ distilled mgbe niile, n'ihi na ọ nweghị mineral na nri ndị dị mkpa beta kwesịrị ịdị ndụ. Ọ na-abakarị uru iji ihe mgbakwunye mkpuchi mkpuchi.
Azụ Betta ga-eme nke ọma n'ime mmiri nwere pH "na-anọpụ iche" nke gburugburu 7.0. Ọtụtụ pH mmiri mgbata ga-adaba n'ime oke nke 6.5 ruo 7.5. Ọ dị mfe ịgbanwe ọnọdụ okpomọkụ ozugbo site na ọkpọkọ ka ọ bụrụ ebe kacha mma maka azụ gị.
Ikwesighi iji mmiri distilled mee mgbanwe mmiri na tank azụ gị. Ihe kpatara nke ahụ bụ enweghị mineral nke mmiri na-ekpo ọkụ. Azụ na ihe ọkụkụ na-ejikwa mineral dị na mmiri, ebe ụmụ mmadụ nwere ike nweta ihe niile dị ha mkpa site na nri. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana mineral ga-edozi ma dozie ọkwa pH na mmiri.
Kwụpụ 1: Malite na 1 oghere 1 galọn nke mmiri ọñụñụ. Kwụpụ 2: Tinye 2 Drops nke NovAqua Plus kwa galọn mmiri. Nzọụkwụ 3: Tinye 1/2 Tea Ngaji nke Aquarium nnu kwa galọn mmiri. Nzọụkwụ 4: Tinye 1 Drop nke Aquari-Sol kwa galọn mmiri. Kwụpụ 5: Were mmiri mgbata jujuo ihe fọdụrụ n'ime akpa ahụ. Kwụpụ 6: Ebe E Si Nweta Eke:.
Mmiri mmiri nwere karama bụ ihe ọzọ dị oke ọnụ karịa mmiri mgbata, mana n'adịghị ka mmiri a na-agbanye mmiri, emebeghị ya iji wepụ mineral na nri. Mmiri a agaghị enwe chlorine n'ime ya, ya mere ọ dị mma iji na tankị betta ma ọ bụrụhaala na ọkwa pH dabara na ọkwa betta dị mma.
Azụ Betta na-eme nke ọma na ọkwa pH na-anọpụ iche nke 7.0 mana ọ nwere ike ịnabata oke n'etiti 6.5-7.0.
Mmiri mgbata nkịtị dị mma maka imeju akwarium ma ọ bụrụhaala na ị hapụ ya ka ọ nọdụ ruo ọtụtụ ụbọchị tupu ị gbakwunye azụ (chlorine na mmiri mgbata ga-egbu azụ). Ị nwekwara ike ịzụta ngwọta dechlorination n'ụlọ ahịa anyị.
Mmiri dị ọcha na -abụkarị nhọrọ dị mma ebe ọ bụ na usoro nsachapụ na -ewepụ kemịkal na adịghị ọcha na mmiri. Ekwesighi ị drinkụ mmiri distilled ebe ọ na-enweghị mineral na-emekarị, gụnyere calcium na magnesium, nke bara uru maka ahụike.
Mmiri a gbazere agbarụ nwere chlorine? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, EE! Mmiri Durastilled enweghị chlorine. Mana mgbasa mmiri dị ala enweghị ike iwepụ ma kpochaa chlorine nke ọma.
Ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike idowe ọkwa ndị a na tank gị n'ihi mmiri isi iyi a na-eji, ọ ga-akacha mma ka ị gbanwee gaa na mmiri distilled ma ọ bụ gbanwee osmosis ka ị nwee ike ịchịkwa mgbanwe ndị a.
Mana ụdị dị mkpụmkpụ bụ na obere mmiri na-agbanwe nke 10-20% otu ugboro kwa ụbọchị 7-10 kacha mma maka ahụike betta gị. Nke a na-echekwa na ị na-eme nzacha. Ị nwekwara ike ime mgbanwe mmiri nke 20-30% otu ugboro kwa izu 2-3, mana obere mgbanwe mmiri dị mma maka ọnọdụ mmiri kwụsiri ike! Apr 18, 2021.
Azụ anụ ọhịa Betta na-ebi na mmiri na-adịghị nwayọọ dị ka swamps, obere ọwa mmiri ma ọ bụ ọbụna osikapa. Bettas na-ebikarị n'ihe a na-akpọ gburugburu mmiri ojii ebe mmiri ahụ bụ agba aja aja gbara ọchịchịrị. Tannin na-esiji mmiri na-acha aja aja, dị ka mgbe ị na-agbakwunye mmiri ọkụ na akpa tii.
Ndị na-echekwa azụ̀ nwere ike ime ka mmiri ọ̀tụ̀tụ̀ mmiri dị nchebe maka azụ ha site n'iji mmiri ntụ mmiri na-eme ya nke ọma, nke a na-enweta site na ụlọ ahịa aquarium ma ọ bụ ụlọ ahịa anụ ụlọ. Họrọ ngwaahịa dị ka StressCoat (nke API mere) nke na-ewepụ ma chlorine na chloramine ozugbo yana ijikọ ọla ọ bụla dị arọ.
Kpatụ mmiri. Mmiri nke ọtụtụ ndị na-azụ azụ̀ na-eji na-esi n'akpa mmiri gị pụta ozugbo! Otú ọ dị, ị gaghị eji mmiri mgbapụ na tank azụ gị na-ebughị ụzọ dozie mmiri ahụ.
Ọ bụrụhaala na ị naghị emebiga ihe ókè na tank gị, mgbe ahụ nnu aquarium dị mma maka bettas. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-eji nnu aquarium agwọ ọrịa ndị dị nro, ndị ọzọ na-agbakwunye ya na tank ha dị ka ihe mgbochi n'ozuzu. Agbanyeghị, ọ dị mkpa icheta na bettas anaghị achọ nnu aquarium.
Mmiri distilled dị mma ị drinkụ. Ma eleghị anya ị ga -ahụ ya dị larịị ma ọ bụ gbarụọ agbarụ. Nke ahụ bụ n'ihi na ewepụrụ ya mineral ndị dị mkpa dịka calcium, sodium, na magnesium nke na -enye mmiri mgbata ụtọ ya nke ọma. Ihe fọdụrụ bụ naanị hydrogen na oxygen na ọ nweghị ihe ọzọ.
Azụ Betta ọ chọrọ nzacha? Ejighị nzacha chọrọ ntinye aka na nnukwu ọrụ. Iji nzacha dị mma maka Betta gị. Ọ bụrụ na ịhọrọ ịghara iji nzacha mgbe ị na-edobe Betta bụ nnukwu nkwa n'ihi na ị ga-achọ ime mgbanwe mmiri buru ibu kwa izu ka mmiri ghara ibu nsi.
Otu esi eweda pH n'ime aquariums: Jiri reverse osmosis (RO) ma ọ bụ deionized (DI) mmiri mepụta pH achọrọ wee nye nchekwa. Kwadebe mmiri mgbe niile ma nwalee pH tupu ịtinye ya na akwarium gị. Jiri osisi driftwood chọọ akwarium gị mma. Tinye peat moss ma ọ bụ peat peat na nzacha gị.
Ekwesịrị idobe pH n'etiti 6.5 na 8. Ekwesịrị ịgbanwe mmiri ugboro ugboro, ọbụlagodi otu ugboro n'izu, iji hụ na azụ nwere mmiri dị ọhụrụ. Hụ ka esi azụ azụ beta gị ebe a.
Azịza ngwa ngwa: Mmiri distilled dị mma maka azụ
Azịza ngwa ngwa: Azụ Betta nwere ike ịlanarị na mmiri distilled
Ajụjụ: Mmiri distilled ọ dị mma maka azụ Betta
Ị nwere ike iji mmiri distilled maka azụ Betta
Enwere m ike iji mmiri distilled maka azụ Betta
Azịza ngwa ngwa: Ị na-eji mmiri distilled maka azụ Betta
Azịza ngwa ngwa: Enwere ike iji mmiri distilled maka azụ Betta
Enwere m ike itinye azụ Betta m na mmiri distilled
Ị nwere ike iji mmiri distilled maka tankị azụ azụ Betta
Ajụjụ: Enwere m ike iji mmiri ọfụfụ maka azụ Betta m
Azịza ngwa ngwa: Ego ole Ph kwesịrị ịdị na mmiri maka azụ Betta
Previous Post: Ajụjụ: Kedu ka mmiri azụ Betta kwesịrị ịdị ọkụ